दुःखद खबर- कृष्ण बहादुर महरालाई पत्नीशोक, महरा पत्नी सीताको नि’धन
November 4, 2020 3793
कोरो’ना पुष्टि भएर स्वास्थ्यमा गम्भि’र स’मस्या देखिएकी पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराकी पत्नी सीता महराको निधन भएको छ। उनको स्वास्थ्यमा स’मस्या भएपछि उपचा’रका लागि दागंवाट हेलिकप्टरमा काठमाडौ ल्याइएको थियो ।
यही कात्तिक १४ गते शुक्रबार हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याई नर्भिक हस्पि’टलमा भर्ना गरिएकी उनको बुधबार बिहान नि’धन भएको हो। कात्तिक १५ गतेदेखि भेन्टि’लेटरमा रहेकी उनको उप’चारकै क्रममा आज बुधबार बिहान ६स.२५ बजे निधन भएको अस्पता’लले पु’ष्टि गरेको छ। सीता महरा माइस्थे’निया नामक रो’गबाट १० वर्षदेखि पी’डित थिइन्।
बुबा मुक्तबहादुर थापा र आमा खि’र्मादेवी थापाका पहिलो सन्तान थिइन् सीता । उनी रोल्पाको गजुल धौलेगाउँमा वि।सं। २०१८ साउन १३ गते शुक्रबार जन्मिएकी थिइन्। नेकपा नेता कृष्णब’हादुर महरासँग २०३५ सालमा उनको विवाह भएको थियो।
महरा भूमिगत भएपछि सीता महराले पिन तत्कालीन राज्यबाट धेरैपटक या’त ना भोगेकी थिइन् । २०५४ साउन २९ गते राति रोल्पा मेबाङस्थित घरमै आएर नाबालक छोराछोरीलाई घरमा थु नेर गिरफ्ता’र गर्न थालेपछि उनी प्रह’रीको घेरा तो डेर भा ग्न सफल भएकी थिइन्।
घरभित्र थु नि एका छोराछोरी पनि घरपछाडिको ढोकाबाट भा ग्न सफल भएका थिए। त्यही दिनदेखि घर छोडेको महराको परिवारै पूर्णका’लीन रुपमा जन यु द्धमा सहभागी भएको थियो।
सामान्य लेखपढ मात्रै गर्न जानेकी सीता महरा तत्कालीन माओवादीको ठूलो जिम्मेवारीमा नरहे पनि उनले पति कृष्णबहादुर महरालाई पारिवारिक र राजनीतिक सहयोग पुर्‍याएकी थिइन्। – ताजा खबर
Prevबिष्णु माझीलाई श्रीमानले मिडियामा देखिन नदिएकै हुन् त? बल्ल बाहिरियो वास्तविकता (भिडियो सहित)
Nextड्राईभर भाई सुजनले बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका पाए। बसमै देखेर पर्यो लभ (भिडियो)
आज थप २७९ जना संक्रमित थपिए, कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस्
आज असोज १५ गते बिहिबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
आज फेरि ७ कोरोना संक्रमित थपिए, यो सँगै नेपालमा संक्रमित संख्या १०९ ..
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (59972)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (58871)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (58424)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (50747)